SlickText: Maxay Yihiin Astaamaha Iyo Awoodda Isku Dhaxgalka Suuqgeynta Suuq-geynta SMS? | Martech Zone
Ganacsiyada badankood waxay ka fekeraan farriinta qoraalka oo kaliya awoodda ay ugu diraan farriin qoraal macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, farriimaha SMS iyo MMS ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay. Marka laga reebo shuruudaha aasaasiga ah ee u hoggaansamida, barnaamijyada suuqgeynta ee farriinta qoraalka ayaa si weyn ugu xuubsiibtay tiro badan oo ah fursadaha kaqeybgalka, otomatiga, qaybinta, shaqsiyadeynta, iyo awoodaha isdhexgalka.
SlickText waa madal farriin muuqaal ah oo dhammaystiran, muuqaal hodan ku ah ganacsiga adag ee aasaasiga ah ee doonaya kaliya inuu sameeyo qoraal qaar waxay siisaa dhammaan shirkadaha shirkadaha doonaya inay si buuxda u dhex galaan SMS iyo MMS xeeladahooda iibka iyo suuqgeynta.
Dulmarka Guud ee SlickText
Farriinta qoraalka ayaa si aan caadi aheyn u awood badan leh natiijooyin yaab leh. Qaar ka mid ah waxyaabaha aad ku sameyn karto mashiin fariin qoraal ah sida SlickText waa:
Qoraal Ku Soo Biir - Dadku farriin ayey u diri karaan si ay ugu biiraan liisaskaaga suuq geynta SMS-ka iyagoo u diraya eray fure u gaar ah lambarka taleefanka gaaban ee la yiraahdo a shortcode. Erey kasta oo muhiim ah waa mid u gaar ah oo matalaya liistada farriinta qoraalka u gaarka ah. Iyadoo SlickText, macaamiisha ayaa dooran kara oo keydin kara koodhkooda gaaban.
Qoraal ugu codee - Abuurista su'aalo badan oo su'aalo iyo xog ururin ah oo ay macaamiisha iyo kuwa aan macaamiisha ka wada shaqeyn karin fariin qoraal ah. Waxaad markaa u kala qaybin kartaa liisaskaaga macluumaadka aad soo ururisay oo aad dib ugu cusbooneysiin karto macaamiishaada fariimaha qoraalka ee mustaqbalka.
Qoraal ku guuleysta - tartamada iyo xaaqyada ayaa ah hab fiican oo lagu mashquuliyo dhagaystayaashaada isla markaana lagu dhiso liistadaada isla waqtigaas! Dadku ha u qoro eraygaaga muhiimka ah 31996 si ay u galaan fursad ay ku guuleystaan. Madalku way hawlgashaa, socotaa, oo dhammaystirtaa tartamadaaga. Waxay si aan kala sooc lahayn u abaal mariyaan kuwa ku guuleysta waxaanan 100% si otomaatig ah ugu samaynaynaa.
Hal Qof - Marar badan waxaad isku arki doontaa adiga oo bixinaya heshiis gaar ah oo dheeraad ah oo loogu talagalay macaamiisha cusub ee ku soo biiraya liiska suuqgeynta qoraalkaaga. Si looga ilaaliyo dadka inay ku xad gudbaan heshiiskaas, muuqaalkani wuxuu u oggolaanayaa oo keliya qof walba inuu helo soo-dhawayntaada otomaatiga-jawaab hal mar. Haddii ay ka baxaan ka dibna ay dib u doortaan, waxay helayaan farriin soo dhaweyn ah oo beddelkeeda ah.
Xog uruurinta SMS - in la abuuro sahan su'aalo badan leh iyo xog ururinta oo labada macmiil iyo kuwa aan macaamiisha ku jirinba ay ku lug yeelan karaan farriinta qoraalka. Kadib waxaad u kala qaybin kartaa liisaskaaga macluumaadka aad soo ururisay oo aad dib uguheli karto macaamiishaada fariimaha qoraalka ee mustaqbalka.
Kuuboonada wareega - dhiso kuuboon qurux badan si aad ugu dirto macaamiishaada. Si buuxda ayaa loo habeyn karaa oo ay ku jiraan taageerada barcode POS. Kuuboon kasta wuxuu kaloo bixiyaa falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan isdhexgal kasta oo isticmaale uu la leeyahay dalabkaaga.
Abaalmarinta Lacagta - Daahfuri barnaamij abaalmarin daacadnimo ah oo xoojinaya sii-haynta macaamiisha isla markaana dadka ka dhigaysa inay soo noqdaan. Barnaamijkeena barnaamijkeena daacadnimada waa mid aad u fudud oo fudud in la isticmaalo. Macaamiishaadu waa hubaal inay jecel yihiin!
Qoraalada dhalashada - Si fudud u soo ururi maalmaha dhalashada dadka markay isku qoraan qoraalkaaga. Kadib, markay maalintooda gaarka ahi timaaddo, nidaamkayagu wuxuu si otomaatig ah ugu soo diri doonaa farriinta qoraalka dhalashadaada. Waxaad xakamayn kartaa wax walba! Adigu macno ahaan waad dejisay oo iska illowday!
Adeegso CODE STR1362 15% Off!
Ku Bilow SlickText
Muuqaaladda S PlatText Text Message Platform:
U dir Farriimaha Qoraalka Ballaaran - Haddii aad joogtid kombuyuutar ama aad socoto, dhib kuma qabtid inaad dirto qoraalkaaga.
Farriinta Qoraalka Scheduling - Si fudud jadwal ugu samee farriimaha qoraalka si ay ugu baxaan taariikhda iyo waqtiga ay doonaan. Waad dejin kartaa hal farriin, ama daryeeli kartaa dhowr billood oo ah dallacsiinta hal mar. Xitaa waad otomaatig ka dhigi kartaa fariimahaaga adoo jadwal u sameeya si ay kuugu soo celceliyaan si joogto ah.
2 Way Fariin Qoraal ah - Inboxing / 2-way farriinta qoraalka waxay u oggolaaneysaa macaamiisha jira inay ka jawaabaan ololayaashaada oo ay kuu soo diraan farriimo qoraal ah. Waa hab fiican oo aad ugu xirnaan karto ugana jawaabi karto su'aalaha dadku qabaan. Muuqaal fariin ganacsi oo muhiim ah oo ay tahay in qof walba adeegsado.
MMS / Fariinta Sawirka - Si fudud ugu dheji sawirada mid ka mid ah fariimaha qoraalkaaga ee baxaya si aad u xoojiso kaqeybgalka iyo qiimaha jawaabaha ee macaamiishaada. Intaa waxaa sii dheer, MMS waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad u dirto illaa 1,600 oo xaraf oo jirka fariimahaaga ah.
Jawaab otomaatig ah - sidoo kale loo yaqaan 'autoresponders' SMS, jawaabaha otomaatigga ah waa farriimaha otomaatiga ah ee ay macaamiishaadu helaan ka dib marka ay u diraan ereyada qoraalkaaga lambar gaaban. Waad bixin kartaa dhiirigelin, waxaad kaga jawaabi kartaa sawirro, weydiin kartaa su'aalo dheeri ah, iyo waxyaabo kaloo badan!
Goobaha Gaarka ah - waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku kaydiso xogta gaarka ah dadka aad la xiriirto marka lagu daro meelaha caadiga ah sida magaca, emaylka, iwm. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala-soocidda xiriiradaada ku yeelato heer aad u kala adag si aad u heli karto sida gaarka ah ee aad u jeceshahay cidda aad kula xiriireyso bartilmaameedka ololahaaga.
waxkabadalka - Xidhiidhadaadu aad ayey uga badan yihiin lambarrada taleefannada ee liiska ku jira. Mid walba cinwaankiisa ugu sheeg. Astaantani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud ugu milmaan magacyada ugu horreeya, magacyada dambe, iyo inbadan qoraalada kooxdaada si aad u taabato shaqsiyan.
Baaritaano faahfaahsan - Ka faa'iideyso aragti wax ku ool ah oo waxtar leh dadaalkaaga suuq-geynta qoraalka. Iyada oo wax walba laga bilaabo garaafyada ka-soo-galidda / dibedda illaa tirooyinka juqraafiyeed iyo raadinta xiriirinta, SlickText kugu daboolay dhammaan waxyaabaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato.
Qaybta Xiriiradaada - ku abuuri kooxo-hoosaadyo ku jira liistada suuq-geynta qoraalkaaga oo ku saleysan xogta macaamiisha sida koodhka aagga, magaalada, gobolka, taariikhda la qoray, iyo in ka badan.
Ololeyaal faleebo - Muuqaal otomaatig ah oo kuu oggolaanaya inaad u dirto farriimo qoraal ah oo taxaddar leh oo waqti dib u dhigay macaamiisha ka dib markay ku biiraan liiska qoraalkaaga. Waa qalab aad u anfacaya oo kaa caawinaya inaad si joogto ah ula macaamisho macaamiishaada.
Ku soo celinta fariimaha - Ma u baahan tahay inaad si joogto ah farriimo ugu dirto? Habkaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dirto fariin qoraal ah oo otomaatig ah adigoo si fudud u qeexaya macluumaad aasaasi ah. Waad ku celin kartaa farriimaha maalin kasta, bille, laba-toddobaadle, maalmaha qaarkood ee usbuuca ama bisha, iwm. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn.
App-ka Mobilada oo si buuxda loo soo bandhigay - Ku maaree barnaamijkaaga fariin qoraaleedka dhan socodka barnaamijkaaga bilaashka ah ee moobiilka. Waxay ka kooban tahay dhammaan sifooyinka isku midka ah ee waaya-aragnimadayada desktop waxay bixisaa oo taageertaa labada Apple iyo Android.
Xaqiijinta Da'da - Xaaladaha qaarkood, waxaad isku arki kartaa oo keliya inaad doonayso inaad suuq u dhigto dad da ’gaar ah ka weyn. Kaliya fiiri xaqiijinta da'da, deji da'daada u baahan oo adeegsadayaashu waa inay ku soo jawaabaan taariikhda dhalashadooda ka hor inta aan la qorin. Kaliya kuwa buuxiya shuruudaha da'da ayaa ku biiri kara!
Foomamka Ka-Bixitaanka Webka - Dhis foomka ka-doorbid-moobiil-saaxiibtinimo oo loo isticmaali karo bogagga degitaanka, kiosaska, kiniinnada, ama lagu dhejiyo boggaaga. Qaab dhismeedka 'SlickText' ayaa si aan caadi aheyn u fudud in la dhiso foomamkan iyadoon wax aqoon ah u lahayn qaabeynta ama nambarka.
Xiriirinta Ka-Bixitaanka - Ka dooro dadka guji xiriiriyaha. Xidhiidhyadayada xulashada-gaarka ah ayaa si fiican u siiya liiskaaga. Si fudud u dhagsii mid ka mid ah aaladaha mobilada oo dhan iyo barnaamijka farriinta ayaa lagu furi doonaa lambarka iyo erayga muhiimka u ah dad-weynaha.
Qoraal Ku qor Subscribe - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qabsato cinwaanada emailka macaamiisha ka dib markaad ku biirto liiska qoraalkaaga. Waa hab fiican oo lagu kobciyo dadaalka suuqgeynta emailkaaga iyadoo lala kaashanayo suuqgeynta qoraalka. Laga soo bilaabo dashboardkaaga, waxaad si fudud ugu dhoofin kartaa emayllada aad soo ururisay si toos ah bixiyaha suuqgeynta ee aad ugu jeceshahay.
Isku-darka Emailka - Si otomaatig ah isugu xir e-mayllada aad ku qabato adeegyada suuqgeynta iimaylka aad jeceshahay sida MailChimp, Constant Contact, ActiveCampaign, iyo kuwa kale oo badan. Waxaas oo dhami waxay ku dhacaan waqtiga-dhabta ah mana u baahna faragelin adigu. Kaliya deji oo u ogolow xogta inay socdaan.
Dukaan Isdhexgal - Is-dhexgalka tooska ah ee 'SlickText' iyo 'Shopify' ayaa kuu oggolaanaya inaad siiso ikhtiyaari macaamiisha ah si ay uga doortaan liiska suuqgeyntaada SMS-ka ee goobta wax iibsiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay u oggolaanaysaa xogta ka socota Shopify illaa SlickText si aad u abuuri karto qaybo macaamiil ah, bartilmaameed u ah dadka ku saleysan iibsashada, oo aad u soo dirto farriimaha SMS-ka ee la tuuray.
Isdhexgalka Facebook - Laba shimbirood ku dil hal dhagax isdhexgalkaaga Facebook. Iyada oo kaliya 1 guji dheeri ah, waxaad iskutallaabi kartaa-fariimaha qoraalkaaga Facebook sidoo kale. Xitaa waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad wax ka beddesho qoraalkaaga Facebook si ay uga duwanaan karto qoraalkaaga! Daawo Video-ga!
Isdhexgalka Zapier - Zapier waa adeeg isku xidha barnaamijyada iyo softiweerka si wada jir loogu wada adeegsan karo. Isdhexgalkayaga 'Zapier' wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xirto SlickText wax ka badan 1,100 adeegyo caan ah oo dadku maalin walba isticmaalaan.
API-ga ah - Haddii aad tahay horumariye madax-bannaan ama shirkad weyn, SMS REST API-gaagu wuxuu si fudud u oggolaanayaa dalabkaaga inuu bilaabo qorista qoraalka!
Shabakadaha - Ma u baahan tahay inaad soo qabato xogta waqtiga-dhabta ah ee dhacdooyinka ka dhacaya koontadaada? Webhooks-keena waa hab deg deg ah oo sahlan oo loogu talagalay dalabkaaga si uu u soo qabto macluumaadka markay dhacdooyinkaasi dhacaan.
Xogta Xogta - Ma haysaa xog macmiil u gaar ah oo aad jeclaan lahayd inaad ku kala qaybiso? Waxaan kadhigeynaa iskuduwaha dhamaanba macluumaadkaas macaamiishaada hada jira kuwo sahlan oo dhowr guji ah.
SlickText waxay leedahay wax kasta oo ururkaagu u baahan yahay si loo dhiso loona maamulo Qaade iyo CTIA waafaqsan barnaamijka suuqgeynta farriinta qoraalka - oo ay ku jiraan maareynta xiriirka aan xadidneyn, xaqiijinta laba qodob (2FA), keyd badbaado leh, taageero badan oo isticmaaleyaal ah, iyo qorshooyin la qiyaasi karo oo aan qandaraasyo lahayn.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan u fidineynaa adeegyo fara badan oo suuq geyn ah iyo agab waxbarasho oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu horumariyo aqoontiisa iyo inuu xoojiyo xirfadahiisa.
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay SlickText.
Tags: farriinta qoraalka xaqiijinta da'dadhambaalka qoraalka dhalashadactiaFacebook smsmms suuq geynSoo iibso smsslicktextjawaabaha smstartamada smssms kuuboonadasanduuqa smsbarnaamijka daacadnimada smsjadwalka SMSsms qaybsanaantasahaminta smsotomaatiga fariinta qoraalkatartamada fariinta qoraalkafoomamka farriinta qoraalkafarriinta qoraalka suuqgeyntacodeynta farriinta qoraalkafariin qoraal ahqoraal si aad u codeysoqoraal ku guuleysto